Intliziyo yePlaza San Martin-2 Bedroom Apt.(Air Cond) - I-Airbnb
Intliziyo yePlaza San Martin-2 Bedroom Apt.(Air Cond)
Umoya opholileyo ulungiswe yonke indlu ka-1930 ebekwe ngqo kwi-Historical Plaza San Martin. Kutheni uqeshe ihotele xa unokuhlala kwisakhiwo esine-limeños zasekhaya kwaye ufumane amava okwenene eLima. Le flethi ijonge ngasemva kwesi sakhiwo ikulungeleyo ukulala kuba ungeva ingxolo isuka ePlaza ebusuku. Umnyango wesakhiwo ngokuthe ngqo ePlaza San Martin ayikho enye yeendlela ezisecaleni. Ngokwenyani uhamba ngqo kwiPlaza ukusuka kwisakhiwo sam.
Ukulungiswa kwegumbi lokulala eli-2 elikumgangatho we-4 ukuya entliziyweni yePlaza San Martin. Indawo yokuhlala ibekwe ecaleni kweJr. de la Union kumgama omfutshane wokuhamba ukusuka kwi-Main Square, kwiBhotwe likaRhulumente, iLima's Cathedral kunye neemyuziyam. Ukweyona ndawo idumileyo yombindi wedolophu ongqongwe ziindawo zokutyela, iibhari, iibhanki, iithiyetha bhanyabhanya, iindawo zokuthenga kunye nasecaleni kweendawo zokutshintshiselana ngemali. Ibhasi yeMetropolitano kuhambo olukhawulezayo ukusuka kwigumbi elikuzisa ngqo eBarranco naseMiraflores.
4.90 · Izimvo eziyi-273
Ukusukela ukuba iPlaza San Martin isembindini wedolophu yeLima ukuhambo olukhawulezayo kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi kwidolophu yaseLima kwaye kulula kakhulu ukufumana iteksi okanye i-Uber ePlaza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cercado de Lima